လုပျငနျးခှငျအတှကျ အရေးအကွီးဆုံးသော Business Ethics
နယျပယျတဈခုမှာ အကောငျးဆုံး ရှငျသနျနိုငျဖို့ဆိုရငျ ပထမဦးဆုံးအခကျြ ကငျြ့ဝတျတှကေို စောငျ့ထိနျးနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ ဒါမှသာ လုပျငနျးခှငျက တခွားလူတှရေော၊ ကိုယျပါ အလုပျလုပျရတာအဆငျပွပြေျောရှငျလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခါမှာတော့ လုပျငနျးခှငျဝငျနတေဲ့ စာဖတျသူတှအေတှကျ အရေးကွီးတဲ့ Business Ethics အကွောငျးကို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
Business Ethics မှာဘာတှပေါသလဲ?
(၁) ကိုယျကငျြ့တရား ( Morality )
အဖှဲ့အစညျးတဈခုမှာ အလုပျလုပျတဲ့အခါ ကိုယျကငျြ့တရားကောငျးဖို့က သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ ကိုယျကငျြ့တရားကောငျးမှ ကိုယျ့ကို တခွားသောလုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ နှဈလိုမှာဖွဈပွီး သငျနထေိုငျရတာလညျး အားလုံးနဲ့အဆငျပွခြေောမှလေ့ာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ကိုယုံကွညျလေးစားတဲ့ပတျဝနျးကငျြတဈခုကိုလညျး သငျဖနျတီးနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။
(၂) ယုံကွညျစိတျခမြှု ( Reliability )
ဒီအခကျြကလညျး သိပျကိုအရေးကွီးပါတယျ။ တဈခုခိုငျးလိုကျတယျ။ အဆငျမပွဘေူး။ ဒါမြိုးတှေ ခဏခဏမဖွဈသငျ့ပါဘူး။ မဖွဈအောငျ သငျ့ဘကျက ဂရုစိုကျသငျ့တဲ့အခကျြတဈခကျြဖွဈပါတယျ။ တဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကို တဈခုခုခိုငျးလိုကျတဲ့အခါ သငျက “စိတျခလြို့ရတယျ” ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ သငျ့ကိုအလုပျပေးတာမြိုး အမွဲဖွဈနပေါစေ။
(၃) ယုံကွညျမှု ( Trust )
ဒါက ယုံကွညျစိတျခမြှု နဲ့ ဆငျကောငျးဆငျတူနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Trust က သငျ့ရဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားပျေါယုံကွညျမှုပါ။ သငျက စောငျ့ထိနျးရမယျ့ကငျြ့ဝတျတှကေို စောငျ့ထိနျးနိုငျတာမလို့ သငျ့ကိုယုံကွညျတယျ။ သငျ့လုပျရပျတှကေိုယုံကွညျတယျ ဆိုတာမြိုးပါ။ လုပျငနျးခှငျမှာ ယုံကွညျမှုက ဒုတိယမဏ်ဍိုငျပါ။
(၄) ရှေးခယျြမှု ( Choice )
သငျ့ရဲ့ရှေးခယျြမှုတှကေလညျး သငျ့ရဲ့ Business Ethics ပါပဲ။ သငျရှေးခယျြလိုကျတဲ့အရာတှကေ ကောငျးသောရှေးခယျြမှုတှလေညျးဖွဈနိုငျသလို၊ မကောငျးသောရှေးခယျြမှုတှလေညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကငျြ့ဝတျဘောငျပွငျပကနတေော့ သငျရှေးခယျြလို့မရပါဘူး။
(၅) ကငျြ့ဝတျနိယာမ ( Principles )
ကငျြ့ဝတျနိယာမ မှာ (၅) မြိုးကှဲပါသေးတယျ။ အဲ့တာတှကေတော့
တို့ဖွဈပါတယျ။ သငျက လုပျငနျးခှငျမှာ အားကိုးအားထားရတဲ့လူတဈယောကျဖွဈလိုရငျ ဒီအခကျြတှကေိုလညျး သငျမလေို့မရပါဘူး။
(၆) ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ( Relationship )
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးဖို့လညျး လိုပါတယျ။ အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ လူတှနေဲ့ပေါငျးသငျးဆကျဆံတတျဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးမှ သငျ့အနနေဲ့လုပျငနျးခှငျမှာ အားလုံးနဲ့အဆငျပွပွေီး သကျသောငျ့သကျသာရှိတဲ့လုပျငနျးပတျဝနျးကငျြတဈခုကို သငျဖနျတီးနိုငျမှာပါ။
(၇) တာဝနျယူမှု၊တာဝနျခံမှု ( Responsibility )
လုပျငနျးခှငျမှာ သငျ့ရဲ့ တာဝနျယူမှု၊တာဝနျခံမှုကလညျး သိပျကိုအရေးကွီးပါတယျ။ တာဝနျယူတတျတဲ့စိတျရှိတဲ့ လူ ဟာ ခေါငျးဆောငျကောငျးအရညျအခငျြးရှိသူ ဖွဈတဲ့အတှကျ Business Ethics အနနေဲ့ အသအေခြာမှေးမွူရမယျ့စိတျဓာတျကောငျးတဈရပျဖွဈပါတယျ။
(၈) အပွုအမူကောငျး ( Behavior )
စကားတှထေကျ အပွုအမူ က ပိုပွီးစကားပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အပွုအမူကောငျးတှရှေိဖို့လညျးအရေးကွီးပါတယျ။ လိုကျနာရမယျ့ အခွခေံအပွုအမူကောငျးတှကေိုတော့ သငျ့အနနေဲ့ သိကိုသိထားဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော Business Ethics
နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ အကောင်းဆုံး ရှင်သန်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ပထမဦးဆုံးအချက် ကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းခွင်က တခြားလူတွေရော၊ ကိုယ်ပါ အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပျော်ရွှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ Business Ethics အကြောင်းကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Business Ethics မှာဘာတွေပါသလဲ?
(၁) ကိုယ်ကျင့်တရား ( Morality )
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမှ ကိုယ့်ကို တခြားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက နှစ်လိုမှာဖြစ်ပြီး သင်နေထိုင်ရတာလည်း အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေချောမွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုလည်း သင်ဖန်တီးနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
(၂) ယုံကြည်စိတ်ချမှု ( Reliability )
ဒီအချက်ကလည်း သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခုခိုင်းလိုက်တယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါမျိုးတွေ ခဏခဏမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မဖြစ်အောင် သင့်ဘက်က ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို တစ်ခုခုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ သင်က “စိတ်ချလို့ရတယ်” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သင့်ကိုအလုပ်ပေးတာမျိုး အမြဲဖြစ်နေပါစေ။
(၃) ယုံကြည်မှု ( Trust )
ဒါက ယုံကြည်စိတ်ချမှု နဲ့ ဆင်ကောင်းဆင်တူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Trust က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပေါ်ယုံကြည်မှုပါ။ သင်က စောင့်ထိန်းရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကို စောင့်ထိန်းနိုင်တာမလို့ သင့်ကိုယုံကြည်တယ်။ သင့်လုပ်ရပ်တွေကိုယုံကြည်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ယုံကြည်မှုက ဒုတိယမဏ္ဍိုင်ပါ။
(၄) ရွေးချယ်မှု ( Choice )
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကလည်း သင့်ရဲ့ Business Ethics ပါပဲ။ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေက ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ မကောင်းသောရွေးချယ်မှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျင့်ဝတ်ဘောင်ပြင်ပကနေတော့ သင်ရွေးချယ်လို့မရပါဘူး။
(၅) ကျင့်ဝတ်နိယာမ ( Principles )
ကျင့်ဝတ်နိယာမ မှာ (၅) မျိုးကွဲပါသေးတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့
တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က လုပ်ငန်းခွင်မှာ အားကိုးအားထားရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လိုရင် ဒီအချက်တွေကိုလည်း သင်မေ့လို့မရပါဘူး။
(၆) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ( Relationship )
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမှ သင့်အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို သင်ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
(၇) တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှု ( Responsibility )
လုပ်ငန်းခွင်မှာ သင့်ရဲ့ တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုကလည်း သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ လူ ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်တဲ့အတွက် Business Ethics အနေနဲ့ အသေအချာမွေးမြူရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၈) အပြုအမူကောင်း ( Behavior )
စကားတွေထက် အပြုအမူ က ပိုပြီးစကားပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြုအမူကောင်းတွေရှိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ လိုက်နာရမယ့် အခြေခံအပြုအမူကောင်းတွေကိုတော့ သင့်အနေနဲ့ သိကိုသိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။